Exam Materials - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ကဲလုပ်လိုက် ကြရအောင်လားဗျာ..CCNA Exam ကို အမှတ်ပြည့်နဲ့ အောင်သွားအောင်....
If you prepare for the exam using our pass4sure testing engine, we guarantee your success in the first attempt. If you do not pass the 640-801 exam (CCNA) on your first attempt we will give youaFULL REFUND of your purchasing fee AND send you another same value product for free.
* Comprehensive questions with complete details about 640-801 exam
* 640-801 exam questions accompanied by exhibits
* Drag and Drop questions as experienced in the Real 640-801 Exams
* 640-801 exam questions updated on regular basis
* Like actual certification exams, 640-801 exam preparation is in multiple-choice questions (MCQs).
* Tested by many real exams before publishing
* Try free 640-801 exam demo before you decide to buy it in Pass4sure.com
640-801_2.83.rar - 5.21MB
Last edited by Aung Aung; 07-09-2008 at 10:31 PM..
ကော်ဖီ, lifemark, zo
Microsoft. Testking. 70-270.v33.2.218q
Microsoft XP exam ဖြေဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ebook ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ လိုချင်တဲ့သူများ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ စာအုပ် ကိုပိုင်နိုင်အောင် လုပ်ထားနိုင်ရင် 270 exam ကိုလွယ်လွယ်ကူကူ အောင်ပါတယ်။
Re: Microsoft. Testking. 70-270.v33.2.218q
စာမေးပွဲ မဖြေသေးပေမယ့် လေ့လာလို့ရတဲ့အတွက် တင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ ပူတူးရေ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ Myat Lone အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Myat Lone ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Visit Myat Lone's homepage!
Find More Posts by Myat Lone
13-05-2007, 12:30 AM
Originally Posted by Myat Lone
ရပါတယ်ဗျာ။ ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာ။ သားမှာ XP Exam Note ဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိသေးတယ်ဗျ။ မြန်မာပြည်က connection တွေပြန်ကောင်းတဲ့အချိန်ကျရင် သားအဲဒီစာအုပ်ကို upload တင်ပေးပါမယ့်။ သားက ပညာဆို sharing လုပ်မှာ ကောင်းတယ်လို့ ခံယူထားတာပါ။ :)
ကျွန်တော် connection လေးကောင်းနေတုန်းက upload တင်တာ ရလိုက်လို့ XP exam note ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ exam ကိုဖြေမယ့် သူတွေအတွက် အဆင်ပြေမှာပါ။ ကိုမျက်လုံးတို့လို့ လေ့လာချင်တဲ့သူတွေ အတွက်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။
28-05-2007, 02:22 AM
Re: Pass4sure CCNA : 640-801 V2.83 NEW
ဒါကတော့virtual exam ဖိုင်လေးတွေပါ......
Microsoft Exam တွေကိုဖြေချင်တဲ့သူများအတွက်ပါ ..
အဲဒီဆိုဒ်မှာ sample test တွေရော test အတွက်လိုအပ်တဲ့ Exam Formatter ကိုပါ ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်ပါတယ်ဗျာ ..
Last edited by ပူတူး; 05-07-2007 at 02:27 AM..
mcse, linux, ccna အစရှိတဲ့ စာမေးပွဲများအတွက်
ကိုလူဖုန်း နဲ့ သားပူတူး နှစ်ယောက်လုံးကို ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ
သားပူတူးတင်တဲ့ examcollection လေးက နာမည်နဲ့ လိုက်အောင်ကို အတော်လေး ပြည့်စုံပါတယ်
Download လုပ်ရတာလဲ အတော်လေးအဆင်ပြေတယ်
မြန်မာပြည်က စာမေးပွဲ ဖြေမယ့်သူတွေ ဖြေဖို့ကြိုးစားနေသူတွေ အတွက် အတော်လေး အထောက်အကူရမှာ သေချာတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ everlearner အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
19-08-2007, 12:14 PM
mcse, linux, ccna အစရှိတဲ့ စာမေးပွဲများအတွက် လေ့ကျင့်
ကျွန်တော် ခေါင်းစဉ်အလိုက် စုစည်း တင်ပေးသွားပါ့မယ် .. `
Microsoft Internet Security and Acceleration အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းမေးခွန်းတွေပါ ..
Last edited by ပူတူး; 21-08-2007 at 12:38 PM.. Reason: ခေါင်းစဉ်ပြောင်းခြင်း
21-08-2007, 12:39 PM
Re: mcse, linux, ccna အစရှိတဲ့ စာမေးပွဲများအတွက် လေ့ကျင်&#
microsoft exam 70-218 အတွက်ပါ
19-10-2007, 11:31 AM
CCNA 640-801 စာမေးပွဲအတွက် .. လေ့ကျင့်မေးခွန်းပါ ..
Exam Cram ထုတ်ပါ ..
26-10-2007, 03:44 PM
၂၀၀၇ သြဂုတ်လ ကမှ Cisco ကနေ ဒုတိယအကြိမ် ထုတ်တဲ့ CCNA ICND2 Official Exam Certification Guide စာအုပ် ဖြစ်ပါတယ်..
ပါဝင်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ "Virtual LANs and Spanning Tree Protocol, Static and connected routes, VLSM and route summarization, IP access control lists, OSPF and EIGRP configuration, Point-to-point WANs, Frame Relay, VPNs, Network address translation, IPv6, Troubleshooting" အစရှိတဲ့ အကြောင်းအရာများကို လေ့လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
File Info: PDF, 734 pages, 11.3 MB
Download Info:158720181x.zip, 5.86 MB
Last edited by everlearner; 26-10-2007 at 03:50 PM..
ccna 640-802 အတွက် update ဖြစ်တာလေးများရှိရင် ပြောပြပါအုံးဗျာ. 4shared.com မှာ ရှိတာတွေက တော့ရှိပြီးသားပါ. shortcut အနေနဲ့ ကြည့်လို့ ရတာလေးတွေသိချင်ပါတယ်.
မသိတဲ့လူဆိုရင်လည်း 4shared.com မှာတော်တော်များများရှာလို့ ရပါတယ်.
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ hanlinag အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by hanlinag
ဒီစာမေးပွဲအတွက်က Resource နည်းနည်းရှားတယ်ဗျ။ ရသလောက်ရှာပေးထားပါတယ်။
ဒါက Pass4Sure အမေးအဖြေတွေပါ။ (သူ့ကိုဖွင့်ဖို့ Java Runtime(JRE) လိုပါမယ်။ JRE ကို http://www.java.com/en/download/ ကနေ ဒေါင်းလုတ်ချနိုင်ပါတယ်။
Pass4Sure New CCNA 640-802, Latest Q&A
3.42 MB | Tested
Pass4Sure New CCNA 640-802, September
MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-297)
(Exam 70-297): DesigningaMicrosoft Windows Server 2003
Active Directory and Network Infrastructuret
အတွက် လေ့ကျင့်ခန်း စီဒီရွမ် ISO ဖိုင်ပါ...
- ပါရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ကြည့်နိုင်တဲ့ Auto Run menu
- လေ့ကျင့်ခန်းအတွက် eBook
- Microsoft Encyclopedia of Security eBook
- Microsoft Encyclopedia of Networking eBook
- Windows Server 2003 Sampler
File info:ISO, 148 MB
အဆင်ပြေတဲ့ နေရာကနေ ဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်ပါတယ်...
ISO ဖိုင်တွေကို ဖွင့်ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက် ...
Power ISO Trial Version 0.994MB
ဒီဗားရှင်းက Trial ဗားရှင်းဆိုတော့ 300 မီဂါဘိုက်အထိပဲ ဖွင့်ပေးပါတယ်
Last edited by everlearner; 10-11-2007 at 05:30 AM..
70-536 preparation course
Last edited by tu tu; 07-10-2008 at 06:29 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ idmtrooper အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by idmtrooper
MCTS Exam Books Collection
MCTS 70-528 Web-Based Client Development
မိုက္ကရိုဆော့ အသိအမှတ်ပြု Web Application Developer တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ အတွက် စာမေးပွဲ ဖြေတဲ့ အခါ လိုအပ်တဲ့ စာအုပ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်
iEngine ( Exam70 - 528)
Last edited by tu tu; 23-05-2009 at 12:22 PM..
MCTS WEB Exam Preparation Ebooks
MCTS 70-536 Self-Paced Training Kit - Application Development Foundation
iEngine ( Exam70 - 536)
Last edited by tu tu; 23-05-2009 at 12:18 PM..
MCTS Exam 70-526 dot NET Framework 2.0 Windows-Based Client Development
Last edited by tu tu; 29-09-2008 at 11:46 PM..
MCTS 70-529 Distributed Application Development
Last edited by tu tu; 29-09-2008 at 11:49 PM..
Designing for Cisco Internetwork Solutions DESGN Exam 640-863 2nd Edition Oct 2007
Cisco ကထုတ်တဲ့ စာအုပ်တွေထဲက နောက်ဆုံးထုတ် တစ်အုပ်ပါ
ရယူရန် ၀င်းရာဖိုင်၊ ၇.၁ မီဂါဘိုက်
14-12-2007, 08:53 PM
Exam Materials လေးတွေကို ဒီနေရာလေးကနေ ဝေမျှ ပေးမယ်။ exam material တွေကို တောင်းဆိုချင်တဲ့သူရှိရင်လည်း တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရှာဖွေ မိသလောက် ပြန်တင်ပေးပါမယ်။ တခုသတိပြုစေချင်တာက material တွေကိုပဲ အားမကိုးစေချင်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်တကယ်တတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
14-12-2007, 08:55 PM
Microsoft Exam: 70-526
16-12-2007, 06:59 AM
Mike Meyers' A+ Guide: PC Technician
CompTIA A+ exams 220-602, 220-603, နဲ့ 220-604 စာမေးပွဲတွေ အတွက် Mike Meyers ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်စာအုပ်ပါ
FileDen, ၃၆.၇၁၅ မီဂါဘိုက် , ၀င်းရာဖိုင်
Last edited by everlearner; 16-12-2007 at 07:15 AM..
ကဲဘယ်သူမှ မတောင်းဆိုလည်း ဆက်တင်ပေးမယ်ဗျာ။
Microsoft Exam: 70-528
Microsoft .NET Framework 2.0 - Web Based Client Development
Last edited by tu tu; 23-05-2009 at 12:24 PM.. Reason: လင့်ခ်ဖြည့်ရန်
Microsoft Exam: 70-529
24-12-2007, 07:45 PM
Microsoft Exam: 70-549
Microsoft .NET Framework 2.0 - Designing and Developing Enterprise Application
educational ebooks, programming ebooks
Networking for System Administrator(SA) Whoami77 Network ပိုင်းဆိုင်ရာ 51 14-03-2017 05:33 PM
ITPEC (Information Technology Professional Examination Council) Exam အကြောင်းသိကောင်းစရာ poekaunglay87 အထွေထွေဗဟုသုတ007-08-2008 09:55 PM